Dammaanaddeena - MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
Feejignaanta Xirfadeed, Daryeelka Xirfadeed
Xakamaynta Tayada MOLONG Ka Soo Bixitaanka ilaa Gaarsiinta
Weligaa ma la yaabban tahay waxa alaabtaada cusub ee lagaa soo iibsaday ee Shiinaha laga keenay? MOLONG, xitaa ka hor intaan amarkaaga la dhigin inuu yahay jumladle, qaybiyaha, ama qof raba inuu iibsado qalabkii ugu dambeeyay - alaabteenna waxaa loo hagaajiyay nidaam hubiya oo hubiya laba jibbaar tayada, laga soo bilaabo ilaa gaarsiinta.
Isku darista alaabtaada
Ka shaqeynta amarka alaabtaada
Ka dib markaan helno lacagtaada (No Deposit or Payment No No No), asxaabtaada jooga MOLONG waxay bilaabeen ficil waxayna isla markiiba bilaabayaan inay amarkaaga shaqeeyaan
Shaqaalaheennu waxay dib u eegaan faahfaahinta amarkaaga iyo ka baaraandegista amarradaada. Iibintaada xiriirka waxay ilaalin doontaa raadinta amarradaada.
In kasta oo alaab-qeybiyeyaasheena ay yihiin dhammaan soosaarayaasha kalsoonida leh ee waxyaabaha tayada leh, kama qaadaneyno wax fursado ah amarkaaga gaarka ah.
Dhammaan alaabooyinka waxay maraan hanaan QC dhammaystiran:
Wax walba waxaa marka hore loo wareejiyaa Xarunteena Caalamiga ee Qeybinta halkaas oo koox kormeer heer sare ah u tababaran ay ku qiimeeyaan badeecadaada iyadoo lagu saleynayo hab maamuus adag iyo shuruudaha kormeerka. Shuruudahayaguna waa sarreeyaan: keliya boqolkiiba 80 alaabtii markii hore la soo xulay ayaa la siiyaa shaambadeena oggolaanshaha ee marxaladdan Miyaan si sax ah u helnay dalabkaaga? Kahor inta aynaan bilaabin xirxirida, waxaan sameynaa baaritaan dhameystiran si aan amarada si sax ah ugu waafaqno.
Kooxdayada Xakamaynta Tayada ayaa markaa markaa alaabtaada siisa kormeer kale, gudaha iyo dibaddaba, iyadoo la raacayo hab maamuusyo iyo shuruudo adag.
Haddii alaabtu gaarsiisan tahay heerarkeenna, waxaan siineynaa shaambadeena oggolaanshaha. Waxay hadda diyaar u tahay in laguu soo raro adiga!
Tusmada hab maamuuskayaga QC
Kooxda MOLONG xirxirida iyo gudbinta waxay u shaqeeyaan sida saacadaha oo kale, xitaa haddii aan annaga sidaas dhahno. Alaabada marwalba si taxaddar leh ayaa loo baaraa wax soo saar kasta iyo cilladaha naqshadeynta ka hor inta aan la soo dirin si loo hubiyo in sheyga aad ku jeclaatay khadka tooska ah uu yahay sheyga aad ka heshay warqaadaha. Xubnaha kooxdayadu waxay hubiyaan amarka waraaqda oo ay la socdaan xaqiijinta iibsashada tooska ah ee internetka, ka dibna dib u eegaan sheyga laga soo saaray shelf si loo hubiyo inay hubineyso alaabta ku qoran.
Ka dib, iyo markaa ka dib, kooxdu ma waxay u dhaqaaqdaa xirmooyinka amarka, labalaabidda (iyo inta badanba) duubka xumbada iyo cajaladda.
Marka xiga, waxay ka baxday albaabka gacmaha aaminka ah ee ay wataan warqaadayaasha aan aaminka nahay ee la xaqiijiyay.
Marka badeecadaadu ka baxdo albaabadayada, waxaan ku haynaa dabagal illaa ay ka gaarto taada. Kooxda adeegga macaamiisha ee MOLONG waxay had iyo jeer ka shaqeeyaan daaha gadaashiisa si ay wax uga qabtaan baahidaada iyo weydiin kasta. Waxaan la soconaa shixnadahaaga waqtiga dhabta ah, waxaana laga heli karaa waqtiga kuugu habboon inaad ka jawaabto wixii su'aalo ah, ha noqoto emayl, wadahadal toos ah, ama taleefan. Dhib malahan arinta, markasta waxaan u joognaa inaan kuu adeegno.
Kormeerayaasha MOLONG ee Shaqada
Kooxdayada xirfadeed waxay u shaqeeyaan si aan kala joogsi lahayn saacad kasta si loo hubiyo in alaabtaadu ay gaarsiisan tahay heerarka aad u baahan tahay ee aad u qalanto.